Jide ieslọ Ọrụ Akaụntụ | Martech Zone
M nwere ike ịkọrọ gị ụfọdụ oke egwu akụkọ na akụkọ ihe mere eme m na ụlọ akụ na kaadị kredit. Offọdụ n'ime ya ekwenyela na m kpatara ya mana ọtụtụ n'ime ya bụ omume ịkwa emo nke ụlọ akụ. M na-eche otú ndị a ụmụ okorobịa na-ehi ụra n'abalị… oke uru, bailouts, Executive bonuses na mkpari overage ụgwọ adịghị ọbụna budged ha ka mma ha na usoro.
Nke a bụ ezigbo ihe atụ card kaadị akwụmụgwọ azụmahịa m agbanyụrịrị ugboro abụọ ka m na-ejegharị. Tupu njem abụọ a, agwara m ụlọ akụ ahụ na m ga-agagharị ma hụ na anaghị m egosi ọkọlọtọ. Oku ndị a bụ igbu oge - emechiri m ugboro abụọ enyo ọrụ. Ugboro abụọ zuru ezu… na usoro ihe ochie na ntanetị na enweghị nkwado na ngwụsị izu na abalị mere ka m laghachi na nnukwu ụlọ akụ. Anyị ga-akpọ ha JP.
JP nwere ezigbo usoro ntanetị dị egwu. JP nwere ikike nke ndị mba ọzọ. JP nwere ngwa ebe m nwere ike itinye ego na nlele site na ịse foto ya. JP nwere ikike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ m. Ikekwe ihe ndị ahụ les JP kenyere m onye na-azụ ego. Kedu onye ọrụ ụlọ akụ nke onwe? Ọ bụ onye m ga-eziga ozi ma kpọọ oge ọ bụla m nwere nsogbu. Onye na-ahụ maka ego m na-agwa m nọmba 1-800 ka m kpọọ maka enyemaka. Mgbanwe dị ukwuu na usoro ochie nke naanị ịkpọ nọmba 1-800 na mbụ. [Ee, nke ahụ bụ mkparị]
BTW: Onye banki nke m bu onye obi ya maara na o na acho inyere m aka dika o nwere ike. Agbanyeghị, ọ naghị edozi nsogbu ahụ.
Izu ụka a, achọrọ m ịtụ ụfọdụ tiketi ụgbọ elu maka Soro ọgbakọ na San Francisco na njedebe nke ọnwa a. Ejiri m Kayak na kaadị kredit mebie. Ọzọ m ji saịtị Delta.com ọ daa. Ugboro abụọ a ọ kwuru na adreesị m adabaghị na akaụntụ m. Naanị nsogbu nke ahụ bụ adreesị m abanyela n'otu ụzọ ahụ na saịtị abụọ ahụ ka ọ bụrụ na enweghị nghọtahie. Kama ịkwụsị ekwentị, m guzoro na njide mgbe onye nnọchi anya Delta kpọrọ onwe m ụlọ akụ m iji nyochaa adreesị ahụ. (Mara mma nke Delta!)
Onye nnọchi anya Delta ahụ laghachiri gwa m na ụlọ akụ m gwara ha na adreesị m nyere adabaghị. Ugbu a, enwere m iwe. Ọzọ na akara bụ nke m onye oru banki. Onye na-ahụ maka ụlọ akụ m na-enweta nkwado na nkwado teknụzụ ma na-atụ aro ka m nwalee adreesị m na ma ọ bụ na-enweghị Zip4 na koodu zip m. Kpọrọ.
Ebe Delta anaghị ekwe ka ndọtị Zip4 gaa, yabụ oge furu n’etiti ozi ịntanetị m na ọkpụkpọ banki m na-akpọ ndị na-akwado ya bụ ihe ịsacha. Ahapụrụ m onye ọrụ ụlọ akụ nke m mara na ọ ka anaghị arụ ọrụ. Bọchị anọ mgbe e mesịrị na enweghị m tiketi.
N'oge a ị nwere ike ịnọ na-eche ihe kpatara na anaghị m ewere otu kaadị m ọzọ wee kwụọ ụgwọ tiketi ahụ. N'ihi gịnị? N'ihi na nke a kwesịrị ịrụ ọrụ. Nke a bụ ihe kaadị azụmaahịa azụmahịa bụ maka… maka ịme ihe dịka ntinye akwụkwọ maka njem, ịzụta akụrụngwa, wdg do nwere ụzọ ndị ọzọ nke ịzụta tiketi ma ejiri m n'aka na ọtụtụ ndị egbochila sistemụ ahụ wee mee nke ahụ.
Ma agaghị m aga.
Anyị niile ji obi eziokwu na-anagide ọtụtụ nsogbu na ndụ anyị. Anyị na-anagide njehie ngwanrọ, nsogbu ụlọ akụ, nsogbu ekwentị, nsogbu Internetntanetị… ndụ anyị anaghị adị mfe na ihe ndị a niile, ọ na-aghọwanye ihe mgbagwoju anya. Ma dika anyi n’etinyekwu mgbagwojuanya, anyi na achota nsogbu kari. N’etiti nsogbu ndị a niile bụ n’eziokwu na anyị abịala na-atụ anya na anyị ga na-arụ ọrụ ọ bụla ma gharazie ịza ụlọ ọrụ ajụjụ. Ọ dị mfe karị bulie kaadị akwụmụgwọ ọzọ karịa ị na-akpọ ma na-ezigara onye na-echekwa ego m ozi email.
Ma echi m ga-atụfu ụfọdụ ndị ọzọ na arụpụtaghị na ekwentị na na na email m onye oru banki. Nrụpụta ọrụ ya (ọ dị mwute) na-ata ahụhụ, yana otu teknụzụ ndị ọ na-arụ ọrụ. Aga m agba mbọ hụ na emeziri nke a - ka ndị ọzọ ghara ị gabiga ihe m na-agabiga.
Ọ bụrụ na anyị niile ejiri ụlọ ọrụ zaa ajụjụ, anyị ga-aga n'ihu na-emeziwanye ma anyị niile ga-erite uru na ya.
Tags: aza ajụjụichekwa ego na bankụlọ ọrụkaadịarụpụtaghị